प्राचीन मिस्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिरऊनहरू | Absolut यात्रा
लुइस मार्टिनो | | मिश्र
अबु सिम्बलमा रामसेस दोस्रोको मन्दिर
पुरातन इजिप्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फारोहरू लोकप्रियताका लागि जिम्मेवार छन् जुन सभ्यता अझै पनि यस ग्रहमा अझै छ। तिनीहरूप्रति हामी .णी छौं महान स्मारक कार्यहरू जुन हामीले हालसालै संरक्षण गर्छौं र यो पनि कि तपाईंको विश्व सुरक्षित छ यस सबैमा रहस्य र जादू को आभा.
र यो यो हो कि प्राचीन इजिप्टका सबै भन्दा राम्रो विद्वान्हरूले पनि वर्णन गर्न सकेका छैनन् कि नील नदीको सभ्यताले कसरी ती वास्तुकला र इन्जिनियरि ofका भव्य कार्यहरू ती राजाहरूका शासनकालमा निर्माण गर्न सक्थ्यो जब अरू धेरै संस्कृतिहरूले विरलै छोडेका थिए। नियोलिथिक। यदि तपाईं यी असाधारण पात्रहरू अलि राम्रोसँग जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फारोहरूको भ्रमणमा आउन आमन्त्रित गर्दछौं। प्राचीन मिस्र.
1 प्राचीन मिस्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिरऊनहरू, जोसेरबाट क्लियोपेट्रा सम्म
1.1 जोसेर, पहिलो संरक्षित पिरामिडका लेखक
1.2 चीप्स, प्राचीन मिस्रको सब भन्दा महत्वपूर्ण फारोहरू मध्ये पहिलो
1.3 खफ्रे, एक योग्य उत्तराधिकारी
1.4 टुथमोसिस III, एक विजेता
1.6 Amenhotep IV वा Akhenat, Heretic फिरऊन भनिन्छ
1.7 तुतानखमुन, प्राचीन इजिप्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिरऊनहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो
1.8 रम्सेस द्वितीय, निर्माणकर्ता राजा
1.9 क्लियोपेट्रा सातौं, रोमन साम्राज्यको चेकमा राख्ने एक
प्राचीन मिस्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिरऊनहरू, जोसेरबाट क्लियोपेट्रा सम्म
फारोहरूले तीन हजार वर्ष लामो समकालीनमा मिस्रको गन्तव्यस्थान निर्देशित गरे विभिन्न राजवंशहरु। तिनीहरू प्रायः दैवीय पात्रहरू हुन् वा कमसेकम, देवताहरूको वंशज मानिन्छ Horus o Ra। यद्यपि यो मृत्युसँगै फ्युज भएको थियो ओसिसिस, तिनीहरू सही दिव्य श्रेणीमा पुगे। तर, थप कुनै विज्ञापन बिना, तिनीहरू मध्ये सबैभन्दा प्रमुख भेटौं।
जोसेर, पहिलो संरक्षित पिरामिडका लेखक
यो फिरऊनलाई पनि चिनिन्छ नेचरजेट र उसले २ 2665 र २ 2645 ईसापूर्व बीचमा शासन गरेको थियो, उनी पछिका जत्तिकै प्रसिद्ध छैन। तर, यदि हामी तपाईको बारेमा कुरा गर्छौं Imhotepहुनसक्छ तपाई आफैंलाई राम्रो स्थान दिनुहुन्छ। पहिलोद्वारा सुरु गरिएको, दोस्रोले निर्माण गर्यो Saqqara को चरण पिरामिड, मेम्फिसको दक्षिण, आफ्नो साम्राज्यको राजधानी।
यसको आकारको कारण Djoser को स्टेप्ट पिरामिड पनि भनिन्छ, यसले पछि Giza परिसरहरू र सबै पछि पिरॅमिडहरूको मोडेलको रूपमा काम गर्‍यो। र इम्होटोपलाई मानिन्छ इतिहासमा पहिलो महान आर्किटेक्ट.
Saqqara को चरण पिरामिड
चीप्स, प्राचीन मिस्रको सब भन्दा महत्वपूर्ण फारोहरू मध्ये पहिलो
ठीक थियो जो फिराउन थियो Giza को महान पिरामिड यो थोरै पछि र पहिले नै साँच्चै महत्त्वपूर्ण हो। पनि भनिन्छ जुफु, येशू ख्रीष्ट भन्दा पहिले २2589 the and र २2566। बीच इजिप्टको भाग्यहरूमा शासन गरे। ऐतिहासिक हिसाबले ऊ एक जना निर .्कुश शासकको रूपमा ख्याति कमाएको छ, जसमा ग्रीसले शक्तिशाली योगदान पुर्‍यायो हेरोडोटस, एक धेरै कठोर इतिहासकार।
जे भए पनि, हामीलाई Giza को महान पिरामिड बिदाई अरू चीजहरूको लागि बनाउछ। कुनै चीजको लागि होईन, यो केवल एक मात्र हो विश्वको सात आश्चर्य प्राचीन आज हामीसँग छ र कति जना सबैभन्दा पहिले इजिप्ट मिश्रमा निर्माण भएको सबैभन्दा ठूलो पिरामिड छ।
यो विश्वास गरिन्छ कि यसलाई बढाउनको लागि प्रतिभाशाली वास्तुकार थियो हेमिनुजो त्यस समयमा पनि थियो कुराकानी वा फारो आफैं पछि पहिलो मजिस्ट्रेट। र उनको कामको भव्यताले तपाईंलाई यस तथ्यको कल्पना प्रदान गर्दछ कि यो पृथ्वीको सबैभन्दा अग्लो भवन थियो जब ख्रीष्ट पछि १ XNUMX औं शताब्दीसम्म, जब यो ग्रेट ब्रिटेनको लिंकन क्याथेड्रलको राजधानी पार गर्‍यो।
मा काइरोमा इजिप्टियन संग्रहालय तपाईं Cheops को प्रतिनिधित्व देख्न सक्नुहुनेछ। यो एक सानो हस्तिहाडको मूर्ति हो जुन अ English्ग्रेजी पुरातत्वविद् फ्लिन्डर्स पेट्रीले भेट्टाएकी छिन् Abydos, ओसिरिस को पवित्र शहर भनिन्छ।
खफ्रे, एक योग्य उत्तराधिकारी
चेप्सको छोरा, यो फिरऊनले आफ्ना बुबाहरूलाई खराब ठाउँमा राखेको हो भन्न सकिदैन। किनभने ऊसँग आफ्नै पिरामिड मात्र थिएन, तर प्रसिद्ध महान स्फिंक्स, प्राचीन मिस्रको एक महान प्रतीक।
खफ्रेले २ 2547 र २2521२१ बीच शासन गरे र यदि उनले हामीलाई पठाएको कुराको स्मारकीय मूल्यका लागि मात्र उनी प्राचीन इजिप्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिरऊनहरू मध्ये एक हुनुपर्दछ। थप रूपमा, हामी पनि उनको प्रतिनिधित्व छ: जाफ्राको विराजमान मूर्ति, जुन तपाईं पनि यसमा देख्न सक्नुहुन्छ काइरोमा इजिप्टियन संग्रहालय.
जाफ्राको महान स्फिंक्स र पिरामिड
टुथमोसिस III, एक विजेता
हाम्रो अर्को महान फारो उसको रचनात्मक चिन्ताको लागि यत्तिकै उभिएन कि उसको विजयको चाहना। वास्तवमा उनले वर्तमान लेबनान, सिरिया र प्यालेस्टाइनका क्षेत्रहरूमा यति धेरै अभियानहरू चलाए कि उनको शासनकालमा इजिप्शियन साम्राज्यले यसको प्राप्ति गर्यो अधिकतम क्षेत्रीय विस्तार.
टुथमोसिस III ई.पू. १ 1479 to देखि १1425२। सम्म शासन गर्‍यो र मन्दिर निर्माण गर्नुको सट्टा उसले विद्यमानलाई पुनःस्थापना र विस्तार गर्ने व्यवहार गर्‍यो। तथापि, उहाँ सात ठूलो owणी छ कर्नाक ओबिलिस्क। उनको चिहान भेटिएन अतुलनीय राजाको उपत्यका.
अघिल्लो जस्तै यो पनि सम्बन्धित छ इजिप्टको १th औं राजवंश र उनले येशू ख्रीष्ट भन्दा पहिले १ 1390। ० र १1353 बीचमा शासन गरे। उनको शासनकाल लामो र समृद्ध थियो, किनकि उनी त्यस क्षेत्रमा एक हेजमोनिक स्थिति कायम राख्न आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको विजयहरूको फाइदा लिन कसरी जान्दछन्।
उहाँ पनि एक ठूलो निर्माता थियो। उनले पदोन्नति गरेका कामहरूमध्ये नयाँ Thebes को मन्दिर o सोलेबको, Nubia मा। उहाँको समाधि मात्र तथाकथित मेमोनको कोलोसी, दुई विशाल बैठे मूर्तिहरू, प्रत्येक १teen मिटर अग्लो।
Amenhotep IV वा Akhenat, Heretic फिरऊन भनिन्छ
पहिलेको छोरा, उसले १ 1353 र १1336 बीच शासन गर्यो। ऊ इतिहासमा फारो हेरेटिकको उपनामले तल झर्दै छ किनकि उसले स्थापना गर्यो Aten को एकेश्वरवादी पंथ, जो सूर्य बाहेक अरू कुनै थिएन।
मानौं कि यो पर्याप्त छैन, उनले साम्राज्यको राजधानी सारियो TebasaAjetatonहालको अमर्णा, जहाँ उसले नयाँ गुटका लागि ठूलो मन्दिरहरू बनाए जुन पुरानो पुजारीहरूले सम्पत्ति खोस्यो। तर यसको मतलब कलात्मक क्रान्ति पनि थियो। त्यतिन्जेल, इजिप्टी कलाको आइकनोग्राफीले देवताहरुलाई मानवीयको रूपमा चित्रित गर्‍यो। तर Amenhotep IV को साथ नायक शाही परिवारमा पारित भयो।
र हामीले पनि यसबारे तपाईंसँग कुरा गर्नुपर्नेछ, किनकि फिरऊनकी स्वास्नी सबैभन्दा चर्चित थिए Nefertiti यो धेरै पटक चलचित्र र उपन्यासहरूमा देखा पर्‍यो। एउटी महिला जसलाई शासन गर्न प्रतिभा दिइन्छ, केही पालो-इतिहासकारहरू विश्वास गर्छन् कि उनी नै थिईन् सेमेनेजकारा कि उसले पहिले फारोसँग मिलेर पहिले र एक्लै पछि। कलाको विषयमा फर्किदै, ठीक त्यस्तै Nefertiti बस्ट यो प्राचीन मिस्रको सब भन्दा राम्रो ज्ञात शिल्पकला हो।
शासकको रूपमा, अखेनतेन, नेफेर्टिटीको सहयोगमा, हामीले परिवर्तन गरेका थियौं र हामीले परिवर्तन गरेका थियौं अमरना क्रान्ति। यसका साथ उनले प्रधान पुजारीहरूको शाही शक्तिलाई सुदृढ पारे र उनको समय राज्यको लागि संवृद्धि थियो।
तुतानखमुन, प्राचीन इजिप्टको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिरऊनहरूमध्ये सबैभन्दा कान्छो
उहाँ पहिलेका छोरा हुनुहुन्थ्यो तर आफ्नी श्रीमतीको होइन तर मकेटाटनको, उनका सौतेनी बहिनी, केही स्रोतका अनुसार वा अरूका अनुसार उनका बुआमाका। उनले १ 1334 र १1325२। बीचमा मिस्रको भाग्यमाथि शासन गरे, आफ्ना बुबाले गरेको कामलाई उनले अनदेखी गरे।
बोलाइयो बच्चा राजा, पुनर्स्थापना गरियो बहुदेववादी पंथ पुजारीहरूलाई धेरै शक्ति फिर्ता। उनले राजधानी पनि पुन: स्थापित गरे Tebas। तर उसले अघिल्लो अशांत चरणमा बिग्रिएको स्मारकहरूको राम्रो हिस्सा पनि पुनर्स्थापना गर्यो।
तुतानखामुन प्राचीन मिस्रको सब भन्दा महत्वपूर्ण फिरऊनहरू मध्ये एक नहुन सक्छ, तर त्यो पक्कै सबैभन्दा लोकप्रिय छ। द्वारा उनको लगभग अक्षत चिहान को खोज हावर्ड कार्टर र अन्वेषणमा भाग लिने सबैमा परेको जस्तो देखिन्छ भन्ने श्रापले उनलाई पौराणिक आभाले घेरिएको चरित्रमा परिणत गरेको छ। त्यहाँबाट सिनेमा र साहित्यसम्म केवल एक चरण छ र चाइल्ड किंगले असंख्य चलचित्र र उपन्यासहरूमा अभिनय गरेका छन्।
लक्सर मा Tutankhamun
रम्सेस द्वितीय, निर्माणकर्ता राजा
उनी the 66 वर्षसम्म शासन गरे (उनी १२ BC with देखि १२१1279 ईसापूर्वसम्म) सबैभन्दा लामो शासनका साथ फिरऊन मानिन्छन्। उहाँ प्राय जसो सबैभन्दा धेरै बच्चाहरू जन्माउनुभएको बच्चा पनि हो, जसको अनुमानित झण्डै एक सय छ।
तर यो पनि भनिन्छ निर्माणकर्ता राजा ठूलो संख्यामा उनले निर्माण गरेका मन्दिरहरू। ती मध्ये उनीहरुको आफ्नै समाधिस्थल थियो रमेसेमराजाहरूका उपत्यकामा, वा प्रख्यात मन्दिरहरू जसले बनाउँदछन् अबू सिबेल। तर रम्सेस द्वितीय अझ अगाडि बढ्यो। उनले साम्राज्यको पुरानो नयाँ राजधानी नील डेल्टाको पूर्वमा निर्माण गरे Pi-Ramses Aa-najtu वा रामसेस शहर। अन्तमा, महान रोयल पत्नीको नाम पनि तपाईंलाई परिचित लाग्नेछ: Nefertari, जसले "सूर्यले चम्काउँछ" को रूपमा अनुवाद गर्दछ।
क्लियोपेट्रा सातौं, रोमन साम्राज्यको चेकमा राख्ने एक
जब उनी BC१ ईसापूर्वमा सिंहासनमा आए, विश्व आधिपत्य पहिले नै सम्बन्धित थियो रोम। यद्यपि यस सामर्थी महिलाले मिस्रलाई जोगाउन यथाशक्य गरे, जुन अब लाटिन्सको हातबाट रहिरहेकी थिइन।
निस्सन्देह, यो फिरऊनको पद धारण गर्ने सबै मध्ये सबैभन्दा प्रसिद्ध छ। संग तपाईंको सम्बन्ध मार्को एंटोनियो र साथ जूलियस सिजर तिनीहरूले असंख्य चलचित्रहरू बनाएका छन्। केवल सिजरियन, दोस्रो उनीसँग भएको छोरा, उनको साथ सिंहासनमा उनको उत्तराधिकारी हुनेछ टोलेमी XVयद्यपि यो कुनै पनि कुरा भन्दा धेरै प्रतीकात्मक थियो, जब क्लियोपेट्राको मृत्यु भयो भने इजिप्ट एक रोमन प्रान्त भयो।
कर्नाकको रेड चैपल
स्पष्टतया, क्लियोपेट्रा एक असाधारण महिला थिइन् जसले सम्पूर्ण कूटनीतिक नेटवर्क स्थापना गर्न, नौसेना फौजहरूको नेतृत्व गर्न र चिकित्सा उपचार र भाषिक पुस्तकहरू लेख्न जान्दछन्।
अन्त्यमा, हामीले तपाईंलाई देखाइएको पुरानो मिस्रको सब भन्दा महत्वपूर्ण फिरऊनहरू हुन्। उनीहरूको लागि हामी शास्त्रीय विश्वका धेरै ठूला स्मारकहरू र यसको समयको लागि अत्यन्त उन्नत सभ्यताको विरासत .णी छौं। यद्यपि त्यहाँ अरूहरू तिनी जस्तै प्रमुख थिए। उदाहरण को लागी, Menkaure, जसमा हामी गिजा पठारको तेस्रो पिरामिड owणी छौं; Amenemhat I, कम्प्लेक्सको निर्माता Lisht र साहित्यिक कार्यहरूको लेखक, वा रानी-फारो ह्याटशेप्सट, क्लियोपेट्रा को अग्रदूत र जसले निर्माण को आदेश दिए Deir-el-Bahari मन्दिर र रातो चैपल कर्नाकको। के तपाईंलाई यी पात्रहरू रोमाञ्चक जीवनीहरू लाग्दैन जस्तो लाग्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » प्राचीन मिस्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फिरऊनहरू